Buluuqul Maraam. Muqadimada Kitaabka Buluuq Almaraan Q3 Views: Muqadimada Kitaab Buluuq Almaraan Q4 Views: Warning: Table ‘./alshaafi_live/watchdog’ is marked as crashed and last ( automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables. Kitaab buluuqul Maraam Fajr kadib sabti iyo axad kasta بلوغ المرام.
Author: Vicage Meztikora
Sababka keenay ee anynan nijaas u noqoninna ay tahay iyadoo iska ilaalinteedu mashaqa uu yahay; la iskama ilaalin karo.
Ninkuna sidoo kale weeyaane, haweenay biyo ay ku qabeysatay aanu kaga daba qabeysanin intay soo reebtay. Laakiin labada xadiisba, xadiiska Sawbaan iyo Abuu Umaamah labadiisa riwaayaba waa daciif, kol haddii uu daciif yahayna xukun lagama qaadanayo.
Kitaabka Buluuqul Maraam – Sheekh Maxamed Cumar Dirir
Sababta uu ku yimidna waxay ahayd waa la weydiiyey oo nin mallaax ahaa oo dooni lahaa ayaa wuxuu yiri: Sharax Wuluuq waxaa la yiraahaa waxyaalaha carrabka wax ku cabba, sida bisadda iyo ugaadha iyo eygiyo kuwaasoo kale, ku cabidda ay biyaha iyo wixii la mid ah carrabka ku cabbaan ayaa wuluuq la yiraahaa.
Haddiiba afkiisu ugu bulkuqul jirkiisa waxa weeyaan inta kale way ka sii liidataa. Wayna kala duwan tahay xadiiskaasu daciif weeye iyo xadiiskaa dacfi baa ku jira. Asxaabu Sunanka ayagana waxaa u sugnaaday oo xadiiskan ay ku weriyeen: Soomaaliyeyntaasi waa mid bbuluuqul ah oo culumadoo dhani intaan maqlay adeegsadaan xertana la baro.
Bulugul maraam (kitaabaguutuu)
Abii Daawuud isagana waxaa u sugnaaday: Tusaale ahaan, xadiis walba waxaan u qaybinay Matni qoraalka asliga ah iyo Sharax Sheekh Shariif Cabdinuur. Soomaaliyeyntaasi waa mid caan ah oo culumadoo dhani intaan maqlay adeegsadaan xertana la baro. Naaskuu deydeyaayoo carrabkuu soo bixbixanayaayoo wax uu jaqaa buu deydeyayaa. Saddexdaa riwaayadood marka laysu geeyo waxay noqonaysaa biyaha fadhiya inaan laguna kaajin laguna qabeysanin labadiina aan laysku darin isagoo lagu kaajo iyo isagoo lagu dhex qabeysto.
Xadiiskan todobaad xadiiskaasuu marka sharxayaayoo nahyigaas Nebigu- sallal Laahu calayhi wasallam- muxuu yahay? Bukhaari iyo Muslim ayaa weriyey. Midda labaad waxa weeye kaadidisii in biyo lagu shubo oo biyo lagu daahiriyo la amray. Markaa xadiisku saxiix weeyaan.
Buluuqul Maraam | AlShaafici
Illeen saxaabada- ridwaanul Laahi calayhim- kulligood waa wada caadiliin weeyaan oo Allaaba taskiyeeyey- ridwaanul Laahu calayhim- laakiin hadduu weriye raawi kale ahaan lahaa oo saxaabi aan ahayn xadiisku sidaas daciif buu ku noqon lahaayoo sida fannu musdalaxil xadiis lagu yaqaano qofka mubhamka ah [aan magaciisa la sheegin] iyo qofka majhuulka [aan la garanayn] ahba riwaayadooda lama qaato. Waxaan casharada u samaynay cinwaano. Waxaa saxiix yeelay Buluuqkl iyo Ibn Khusaymah.
Xadiiskanu waa kaan kitaabka kalena kusoo marray ee dhahaayey: Yacnii biyo uu nin ku qabeystay baaldi iyo wax la mid ah oo intuu musqul la galay uu ku qabeystay, haweenay inaynan kaga daba qabeysanin wixii kusoo haray, biyo cusub inay qaatado mooyaane. Abii Hurayrah radiyal Laahu canhu waxaa laga weriyey in uu yiri: Laba mafsadood yaa lasoo gudbanaatay: Markaa daliilkaasuu xukunku ku sugnaaday ijmaaca ah mooyaane xadiiskan maanu ku sugnaanin.
Wuluuq waxaa la yiraahaa waxyaalaha carrabka wax ku cabba, sida bisadda iyo ugaadha iyo eygiyo kuwaasoo kale, ku cabidda ay biyaha iyo wixii la mid ah carrabka ku cabbaan ayaa wuluuq la yiraahaa. Biyaha baddu markaa waa daahir oo mudahhir ah; waa lagu dahaara qaadan karaa, waa lagu qubaysan karaa, waa lagu weyso qaadan karaa, dharkaa lagu dhaqan karaa najaasadana lagaga bixin karaa, waa lagu istinjoonayaa…, waa mudahhir weeyaan.
Daciif weeye Ibn Xajar naftiisu maanu dhihine, dacfi baa ku jira buu yiri. Inuu mid kale yahayna waa iska suuroowdaa, kollaba ibhaamkaas xadiiska la ibhaamiyey waxba xadiisku kuma noqonayo xadiisku saxiix weeyaan.
Mashruuca qoraal-u-rogista casharadii Shaykh Shariif Cabdinuur W: Saasuu masalada xukunkeedu noqonayaa. Xadiisku markaa wuxuu tusinayaa: Cabdillahi ibn Cumar radiyal Laahu canhumaa waxaa laga weriyey in uu yiri: Sharax Abii Qadaata na magaciisu waa al Xaarith ibn Ribciyy. Laakiin masalada xukunkeeda oo ah biyuhu hadday nijaasa ku doorsoomaan inay nijaasoobayaan, iyada markaa waxaa weeyaan daliil kalaa laga qaadanayaa, daliilkaasuna waxa weeyaan waa ijmaacul ummah.
Biyahaas la sheegayaana waa biyihii yaraa. Sharax Xadiiska waxaa ka horreeyey xadiiskii nahyinaayey in nin uu ku qabeysto biyo ay soo hambaysay oo kasoo hadhay haweeney ama haweenay ay ku qabaysato biyo nin kasoo hadhay [Xadiiska 6aad].
You are commenting using your Facebook account. Ayadoo taasi jirto, markaa cabitaankii hala daadiyo lama dhihin. Taasi waxay keentay inaan sidan u soomaaliyeyno:.
This Blog is dedicate the stories of buliuqul prophet Muhammad peace be upon him and his Companions, and Stories of all prophets. Haddii ay dani kallifto inaan hadalkii sheekha wax ku kordhino si aan arrin u caddayno, buluiqul adeegsanaynaa [ ]. Sheekhu kitaabka wuxuu ku akhriyey Makkah al-Mukarramah.
Rasuulkii Alle sallal Laahu calayhi wasallam wuxuu yiri: Haddaan lagu qabeysan karin markaa kumana weyso qaadan karo.